ရခိုင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု လက်သည်တရားခံရှာတွေ့ပြီ …. | Danya Wadi
»သတင်းများ»ရခိုင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု လက်သည်တရားခံရှာတွေ့ပြီ ….
ရခိုင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု လက်သည်တရားခံရှာတွေ့ပြီ ….
Posted by danyawadi on August 15, 2012 in သတင်းများ
လိုလားသော အစွန်းရောက် ရခိုင်ပါတီ (RNDP)မှအ၀ကျွန်းသားရခိုင်ဘင်္ဂလီ ဦးအေးမောင်နှင့်၎င်းတို့လူများကြောင့်ဖြစ်သည်။(၁)စတင်ပုံ အခွင့် အရေး
အနည်းငယ်ရသည်နှင့် ရခိုင်ပြည်မှထွက်သော ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေများကို
ဗမာပြည်အစိုးရကရောင်း စားပြီး ရငွေကိုယူနေသည် ရခိုင်ပြည်မှမရဆိုသည့်
အကြောင်း ကိုအခြေခံပြီးရခိုင် ပြည်ခွဲထွက်ရန်ကြိုးစား သည့်(RNDP) ရခိုင်တိုး တက်ရေးပါတီနှင့်ရခိုင်အစွန်းရောက်တို့မှစတင်သည့်လိုက်သောမီပွားမီးစတစ်
(RNDP)သည်ပြဿနာ၏အစကိုသိသော်လည်း ယခုမှနယ်စပ်မှဝင်လာသောသူ များက နိုင်ငံသား/တိုင်းရင်း သားတောင်းသလို လုပ်ကြံပြောဆိုနေပါသည်။မည်
သူကမှထိုကဲသို့မတောင်း ဆိုပါ။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် ယခင်က၄င်းတို့
သား၊အခြားဘာသာဝင်များသည် မနေ့တနေ့ကမှဝင်ရောက် လာသယောင်ပြော
ကြပြန်ရာ နဂိုရည်း စားဟောင်းထက်ထက်မှာမခံရပ်နီုင်ဖြစ်ပြီးထိုနေ့ကသီတာထွေးတစ်
ယောက်ထဲအပြန်နောက်ယောင်ခံ လိုက်စဉ် သဘာဝဓါတ်ငွမှလက်ရှိရည်းစားနှင့် လူသူကင်းရှင်းသည့်နေရာတွင်ကျူးကျူးလွန်လွန်တွေ့ရသော အခါဒေါသ မထိမ်းနိုင်
ဘဲ သူငယ်ချင်းများနှင့်လိုက်ဖမ်းရာ သဘာဝဓါတ်ငွေမကျူးလွန်းနေသူမှာထွက်ပြေး
လည်းဇာတိအရ မျိုးတူဇာတ်တူအချင်ချင်းသာချစ်ကြိုက်သည်။ စစ်တွေ၊ကျောက်တော်မြောက်ဦး၊ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောကျောက်ဖြူ၊ ၇မ်းဗြဲ
၊ကျောက်နီမော်ရခိုင်ပြည်နယ် စသည်တို့တွင်။ရခိုင်နှင့်မူဆလင်ယူသည်ကိုတခါမှ မကြားဘူးမရှိဘူးပါ၊။(လုံးဝလည်းမရှိပါ)မည်သည့်ရခိုင်မလေးကမှ မူဆလင် ကိုမည့် အခါမှချစ်လဲမချစ်မကြိုက်သလိုယူလဲမယူပါ၊ဟုတ်မဟုတ်လာရောက်လေ့လာပါ။
ရာဘာသာကမှလည်းလူသတ်ပါ၊မုဒိန်းကျင့်ပါမဟော၊မဆိုမဆိုင်ယုတ်ညံ့သောစိတ်ဖြင့် ဆွဲခေါ်၊ဆွဲသွင်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။မကြာမှီက ဂျပန်တွင်ဖြစ်ပွာခဲ့သော ဂျပန်မလေးတစ်ဦး
အဆုံး စစ်ဆေးသင့်သည် ။ထောင်ထဲတွင်အိမ်သာမှကြိုးဆွဲချသေဆုံးဆိုသည်မှာမည်သူမှမယုံ
မည်သို့မျှမဖြစ်နိုင်ပေ၊ထောင်သားအရေးကြီးသူကိုမည်သည့်အဆင့်မြင့်အိမ်သာမှမပေးထား၊အိမ်သာ ခွက်ပင်ပလပ်စတိတ်ခွက်သာပေးသည်။ထို့ကဲ့သို့တရားခံအားလုံးသတ်သေမည်ကိုကြိုတင်စဉ်း စားပြီးသာဖြစ်သည်။(ထောင်ထဲရောက်ဖူးသူတိုင်းသိ၏)(ထောင်အာဏာပိုင်များကိုကြိုးပေးသင့်
(၃) ယခြုပသနာတွင်မည်သည့်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူမှလည်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်၊နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တောင်း
ဆိုခြင်း၊တောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ပြသနာကိုပုံကြီးချဲ့လိုပြီး လူအများ ဒေါသစိတ်များဖြစ်လာစေရန်
လှည့်ကွက်တစ်အဖြစ်တရာခံရှာဖွေ ပုံဖေါ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ရခိုင်တွင်သမိုင်းနှင်ချီပြီး
(၄)ယခုပြသနာသည် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူအများစုမှအနည်းစုကို
ရရှိပြီးဖြစ်သည်။နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို (၃)နှစ် ၊(၅)(၁၀)နှစ်တစ်ဆက်ထဲနေထိုင်
ပြီးသွားလာကူးလူသည်မှာမဆန်းလှပါ၊ဘင်္ဂလားတွင်ပင်ဘင်္ဂလီရခိုင်ကျေးရွာများ စွာရှိပါ သည်။ယခင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဥက္ကဌဗိုလ်မှူးကျော်မောင်သည်ပင်ရခိုင်ဘင်္ဂလီပင်ဖြစ်သည်.၊
(၆)ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီသီးတွင် ဥပမာ ထိုင်း၊မလေး၊ဘင်္ဂလာဂျပန် တို့တွင် မြန်မာများစွာအောက်
၄င်းနိုင်ငံများတွင်လည်း မြန်မာများကိုယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါကမည်ကဲ့သို့ကြုံတွေ့ရမည်
(၇)တရားဥပဒေဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြသနာဖြစ်ပွာခဲ့ရာ ကျောက်နီမော်တွင်လူသတ်မှုတွင် တရားခံ
ကိုသမ္မတကြီးနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးပါရန်တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
မည်။ . .
ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပါလီမန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆိုင်ရာ ပါတီ
ပေါင်းစုံ ဥက္ကဌ Baroness Kinnock ရှေ့မှောက်မှာ ခုလို ဦးထွန်းခင်က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ရွာပေါင်း ၂၂ မီးရှို့ ခံရပြီး လူပေါင်း ၁၂၀၀ ပျောက်ဆုံးကာ အစ္စလာမဘာသာဝင် လူပေါင်း
၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ တင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဦးထွန်းခင်က ဒီပြဿနာ
ကို ဖြစ်ပွားအောင် အစိုးရတွင်းက တင်းမာသူတွေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး
ပါတီက အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဗြိတိန် ပါဘီမန်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံ ပေးသူကတော့ များမကြာမီက A friend’s
appeal to Burma (မြန်မာနိုင်ငံသို့ မိတ်ဆွေတဦး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်) ကို ရေးသားသူ
ရခိုင်စီမံကိန်း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ Burma Campaign
UK တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: ရိုဟင်ဂျာ,သတင်း
← Muslims in Myanmar have the RIGHT to use our religion to POLITICALLY FIGHT for getting back all our rights
Burma: The ethnic cleansing of Rohingyas | Adean →
2 comments on “ရခိုင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု လက်သည်တရားခံရှာတွေ့ပြီ ….”
Union August 15, 2012 at 5:50 pm	Reply
အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်။ Myanmar Express ရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာ ဒီလိုသတင်းကို ဖော်ပြပေးတာ ထူးဆန်းနေတယ်။ Myanmar Express က တာဝန်ရှိသူတွေ စိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အယင်သတင်းတွေမှာ ဘုရားနဲ့အမျိုးတူတဲ့ ကုလား ကို နှိပ်ကွပ်ထားတဲ့ အမျိုးမျိုး သော ယုတ်မာပက်စက် အောက်တန်းကျတဲ့ သတင်း တွေ ကို သာ ဖော်ပြနေရာက အခု ဘုရားနဲ့အမျိုး တူတဲ့ ကုလားသတင်း အမှန် (ဘုရားအမျိုးလို့စဉ်းစားမိလို့လားမသိ) ကို ဖော်ပြပေးတာ ဒီကောင်တွေ ရူးနေကြပြီထင်တယ် (အာဏာရူး ၊ စစ်ခွေးရူး) ။တူရကီက ဒေါ်လာသန်း ၅၀။ ဆော်ဒီက သန်း ၅၀ ။ ယူအေအီးကလဲ လှုဦးမယ် ဆိုတော့…… စဉ်းစားကြည့်လို့ ရပါပြီ။ သူတို့ အမေလင် အမေရိကန်တောင် ဒေါ်လာ ၃ သန်းလောက်ပဲ ပေးနိုင်တာ။ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက အများကြီးပေးတော့ ဗမာစုတ်တွေ ခွေးဘုရားပွဲ တွေ့ပြီး သိပ်ပျော်နေကြပြီ။ တစ်သက်လုံးက NLD နဲ့ မွတ်စလင်များကို ပိုးစိုးပက်စက် နှိပ်ကွပ်စော်ကားရေးသားခဲ့တဲ့ Myanmarexpress.net လို စစ်ခွေး Website ကတောင် အထက်က သတင်းကို ဖော်ပြပေးလာတာဟာ????????????
Union August 15, 2012 at 6:10 pm	Reply